I-OTA-17 ifika ixhasa i-NFC kunye nolunye uphuculo | Ubunlog
Ukuba kufuneka ndinyaniseke ngokupheleleyo, ndibhala eli nqaku kuba umxholo ophambili wale bhlog ngu-Ubuntu, wabasebenzisi boluntu abanokuba nomdla kwaye kuba ndinethebhulethi enale nkqubo yokusebenza, kodwa inyani yile, ngoku, andizukuyicebisa. Ukhetho lomntu ecaleni, iindaba kukuba i-UBports Usungule la I-OTA-17 Ubuntu Chukumisa, uhlaziyo oluzisa iindaba nokuba zincinci kune le yasungulwa malunga neenyanga ezimbini ezidlulileyo.
I-UBports ikhankanya ukuba, njengakuqaliso lonke, inkxaso yongezwa kwizixhobo ezitsha, ngakumbi iRedmi Qaphela 7 Pro kunye neRedmi 3s / 3x / 3sp. Baye basebenzisa eli thuba ukusikhumbuza loo nto basebenza ekwenzeni umtsi wokuseka inkqubo yokusebenza kwi-Ubuntu 20.04, Inguqulelo yeLTS yamva nje. Ukuba konke kuhamba kakuhle, loo mzuzu uya kuza ehlotyeni. Apha ngezantsi unoluhlu lweendaba ezibalaseleyo eziye zafika kunye ne-OTA-17.
Amagqabantshintshi e-Ubuntu Touch i-OTA-17
Inkxaso yeNFC, ngakumbi uninzi lwezo zihambelana ne-Android 9.
Ifleshi, ukusondeza, ukujikeleza kunye nokujolisa kwekhamera kulungisiwe kwizixhobo ezininzi, hayi iPineTab, yiyo loo nto iyinxalenye yokungaqiniseki kwam ngale nkqubo yokusebenza.
Umaleko omtsha wekhibhodi ebizwa ngokuba yiMacedonia.
Uqikelelo lwebhodi yezitshixo eSwitzerland kunye nezinye zesiNgesi.
I-Libertine ngoku isebenza ngokuchanekileyo kwi-OnePlus 3.
Ukuphuculwa kokuhambelana nezinye iiPixels.
Ukuphuculwa kokuhambelana kunye neeakhawunti ezikwi-Intanethi kwezinye izixhobo.
Mir 1.8.1 (yayiku-1.2.0).
Ngokuka-UBports, ngelixa babesebenza ukumilisela i-OTA-17 benze inkqubela phambili enkulu ukwenza ukutsiba kusekwe kwi-Ubuntu 20.04, kodwa I-OTA-18 iya kuqhubeka isekwe kwiXenial Xerus. Iya kuba kukukhutshwa okuncinci, njengale, kodwa ngokulandelayo kuya kuba kusekwe kwi-Ubuntu 20.04 Focal Fossa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Ifowuni yeBuntu » I-OTA-17 ifika nenkxaso ye-NFC nolunye uphuculo
Avogadro, hlela kwaye ubone iimolekyuli ngale nkqubo yomthombo ovulekileyo